Ryan Giggs Muxuu ka yiri qorshaha Paul Pogba loogu celinaayo Kooxda Manchester United | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Ryan Giggs Muxuu ka yiri qorshaha Paul Pogba loogu celinaayo Kooxda Manchester United
Ryan Giggs Muxuu ka yiri qorshaha Paul Pogba loogu celinaayo Kooxda Manchester United
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 4-07-16 7:23 AM Ryan Giggs ayaa sheegay in ciyaaryahanka khadka dhexe ee France Paul Pogba uu helay “wax kasta”, iyadoo kooxdiisii hore ee Manchester United lacag rikoor ah ay ku dooneyso.
Pogba ayaa la rumeysan yahay inuu ku kacayo £ 80 – haddii uu ka dhaqaaqayo kooxdiisa Juventus, xili lala xiriirinayo kooxaha waweyn ee qaarada yurub.
goolkii labaad ee France ayuu dhaliyay kulankii ay wajaheen Iceland xalay, xili xulkiisa ay iska xaadiriyeen wareega Afar dhamaadka tartanka.
Waxqabadkiisa qeybtii hore ee ciyaarta Pogba markii laga falanqeynayay ITV, Giggs ayaa yiri: “Waa ciyaaryahan tayo leh oo toogasho fog sameyn kara, waxaan ogsoonahay in uu yahay ciyaaryahan waxkasta heysta.
“Jir aad u weyn, una xoog badan ayuu leeyahay, waxa uu si deg deg ah usameyn karaa weerar ama daafac, waa xiddig sare ayuu yiri Giggs.
Pogba iyo Giggs ayaa ka wada ciyaaray United sanadii 2012, ka hor inta uusan 23-sano jirkaan go’aan ku gaarin ku biirista kooxda Juventus , kadib markii uu boos ka waayay kooxda koowaad ee Manchester United.